Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : fanasahiranana mampitombo ny mety fitrangan’ny loza | NewsMada
Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : fanasahiranana mampitombo ny mety fitrangan’ny loza
Par Les Nouvelles sur 01/06/2018
Na mandry aza ny tany ka manjaka ny fandriampahalemana tsy azo anaovana baranahana ny fitandroana ny filaminana. Ny ratsy hono tsy kely làlana ka ny fahamalinana no antoka voalohany hisian’ny fandriampahalemana. Mainka moa izany amin’izao fotoana izay anjakan’ny setrasetra mandravarava ny fitonian’ny mponina izao, tsy ny kely vitan’ny mpitandro filaminana indray no afaka iniana kianina.
Nefa kosa misy ihany ny tsy mety izay tsy azo odian-tsy fantatra eo amin’ny fomba fanaon’ny maro amin’ireo mpitandro filaminana. Tsy resaka mikasika ny kolikoly akory no velabelarina eto. Misy ihany moa ny feo mandeha momba izany, sarotra anefa ny miampangana raha tsy eo ny porofo. Lasa fanendrikendrehana no betsaka. Ambonin’izany, aiza moa ny sehatra tsy marary noho io fomba mikiky ny firenena io? Ka rehefa hoe tena hitsabo ka handoatra ny vay, tsy rantsana na sampana no ampifandimbiasana tsindrotsindronina fa ny vatana manontolo no anaovana fizahana sy itondrana fanefitra araky ny fisehon’ny fery.
Na tsy mahomby firy aza, araky ny hevitry ny olona maro, ireny fanakanan’ny zandary sy pôlisy, na eny antenantenan-dàlana na an-tampon-tànana, dia tsy isika tsy tompon’andraikitra no afaka hitompoteny fantatra amin’ny fanoroana tetika mety handaitra kokoa amin’ny fanaovana sakantsakana mba tsy hahafahan’ny jiolahy manaram-po hivezivezy. Tsy mijanona amin’izay ihany moa ny antony anaovana ireny fisavana izay manorisory indraindray, fa fomba hanerena ny rehetra hanaja ny fepetra rehefa mampiasa ny arabe.
Misy aza amin’ireny fisavana ireny, mbola maro ihany ny fiara tsy manaraka ny fenitra, azo heverina ho loza mandehandeha mety hitera-doza ho an’ny sasany.
Nefa matetika tsy eo amin’ny toerana tokony anajanonana fiara no safidian’ny polisy sy zandary anakanana fiara. Mitarika fahasahiranana ho an’ny rehetra sady mampitombo ny fikatson’ny fifamoivoizana ny fomba fijanon’ireo fiara anaovan’ny mpitandro filaminana fisavana. Miteraka fahasahiranana ? Ny fitombon’ny fahasahiranana mazava ho azy fa mampitombo ny anton’ny mety fitrangan’ny loza.
Ohatra fotsiny : ny làlana efa azo lazaina ho tery ihany, nefa andaniny sy ankilany mifanandrify dia samy misy pôlisy. Ny eo ampita andrefana manakana ny fiara mianatsimo, ny eo atsinanana izay mizotra mianavatra. Azo an-tsaina fa manery kokoa ny arabe afaka izorana izany… Isan’andro olona ambony firy no mandalo an’izany rehefa ho eny Iavoloha. Tsy mbola nisy nifampiresaka tamin’ny namany minisitra tompon’andraikitra mikasika an’izany zavatra tsotra izany. Tsy mahatazana sa tsy mandraharaha ? Lavitra anareo ny fahasahiranan’ny vahoaka. Vava fotsiny.